1. Inokodzera macodra infrared kure kudzora midziyo yemumba;
2. Inogona kure kudzora akawanda emidziyo midziyo yemumba;
3. Iine kiyi yekudzidza / yekudzora multiplexing kiyi, 5 ~ 10 kiyi yesarudzo kiyi, uye 10 ~ 20 mashandiro ekudzora makiyi. Kiyi yekusarudza kiyi uye yega yega kiyi yekudzora kiyi pamwe chete vanoona kudzora kwechigadzirwa;
4. Kiyi yekusarudza chishandiso uye akasiyana makiyi ekudzivirira mashandiro anogona kushandiswa kudzidza uye kudzora zvakajairika mashandiro emidziyo yakawanda;
5. Mari yakaderera uye yakasimba anti-kupindira kugona.
Iyo iri kure controller inoumbwa neiyo infrared yekugamuchira uye kuendesa dunhu, chiratidzo chinogadzirisa wedunhu, wepakati mutungamiriri 8031, chirongwa uye data memory, keyboard uye mamiriro chinongedzo wedunhu.
Remote control ine maviri anoti: kudzidza nyika uye kutonga nyika. Kana remote irikudzidza, nguva dzese mushandisi paanodzvanya kiyi yekudzora, iyo infrared inotambira dunhu inotanga kugamuchira iyo yekunze infrared chiratidzo, uye panguva imwechete inoichinja kuita chiratidzo chemagetsi, uye wozozoonekwa, kuumba, kukwidziridzwa, uyezve iyo CPU inowanzo kuenzanisa. Iyo bhainari data yeimwe neimwe sampuli poindi inochengetwa mune yakasarudzika yekuchengetedza unit ine masere masere seyuniti yekuzotevera kudzora kwechigadzirwa. Kana iko kure kure kuri munzvimbo yekutonga, nguva yega yega mushandisi paanodzvanya kiyi yekudzora, iyo CPU inoverenga nhevedzano yedata remabhinari kubva kunzvimbo yakasarudzwa yekuchengetedza, uye inoburitsa zvakateerana (iyo nguva yenguva pakati pemabheti nemabhiti yakaenzana nenguva yenguva panguva yesampling) Kune iyo chiratidzo inobata dunhu, panguva imwe chete, iyo modulation yedunhu inoita chiratidzo chemodhiyo. Mushure mekunge chiratidzo che modulation chakwidziridzwa, chinoburitswa neiyo infrared emitting diode, kuti izive kutonga kweiyo kifaa basa inoenderana nekiyi.
• Zvishandiso: ABS, Silicone
• Kurema kweNet: 66-101g
• Keypad NO. :
Inofambiswa ne: CR2025 kana 2 AAA mabhatiri (asina kuiswa)
• Nharaunda yekufambisa: 10m
• Magetsi emagetsi: DC 3V
Simba rakakosha: 120 ± 30g
Kudzora kona: 30-45 degree (kumusoro, pasi, kuruboshwe, kurudyi)
• Hupenyu hwakakosha: ≥100 zviuru zviuru
• Yemahara kudonha bvunzo: 100cm
• Electrostatic nharaunda bvunzo: ± 15KV
• Bhatiri ambient tembiricha: -10 ℃ ~ 45 ℃
Kakawanda humidity bvunzo: 40 degree hama humidity ye90% (12hr)
• Pasuru: Pe bhegi, Blister bhokisi, papaer bhokisi kana maererano nevatengi.
• CTN huwandu: 200-300 zvidimbu / rimwe katoni kana sezvaunoda
• Especial yekufambisa makiyi dhizaini
• maOEM neODM maodha anogamuchirwa, Kusanganisira Ruvara, Kudhinda, Logo, mabhatani zvinhu uye maBhatani basa.
• Zviri pachena Kudhinda uye nyore kumisikidza uye kushanda, lithiamu bhatiri, kuchengetedza simba
• Dhizaini yemazuva ano nechitarisiko chemafashoni nemhando yepamusoro
• Yekumhanyisa chip inoita kuti iratidzike nekukurumidza
• Ipa mutengo wakanakisa, Nguva yekukurumidza yekuendesa
• yakasimba, uye ruvara haruzombofa
• MOQ 2000pcs, FOB shenzhen neUS. Dhora
Pashure: IR kudzidza kudzora kure
Zvadaro: Zvirongwa zvekudzivirira kure
Tsika Ir Remote Controller
Ir Universal Remote Kudzora
Remote Kudzora Ir
Smart Ir Remote Kudzora
Yenyika Ir Remote Control